उपत्यकामा निषेधाज्ञा, कुन कुन क्षेत्र बन्द ?Nepalpana - Nepal's Digital Online
उपत्यकामा निषेधाज्ञा, कुन कुन क्षेत्र बन्द ?
नेपालपाना श्रावण १० २०७८
काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यकामा यही २० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आजको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । थपिएको आदेश सोमबार बिहान १ बजेदेखि लागू हुनेछ ।
यसरी खुल्दैछ निषेधाज्ञा, बजारदेखि यातायातसम्म सबै रोटेसनमा सञ्चालन हुने
स्मार्ट लकडाउन भयो यस्तो, के के खुले के बन्द हेनृुहोस् ! (पूर्णपाठ)
थपियो निषेधाज्ञा, यी क्षेत्र अझैं बन्द !
देशभर ‘निषेधज्ञा’मा थप कडाइ
श्रावण १०, २०७८ आइतवार १८:५९:२८ बजे : प्रकाशित